သမိုင်း အဆက်ဆက် တော်လှန်ရေးများ၏ ကောက်ကြောင်းများ(7) - Yawnathan News
သမိုင်း အဆက်ဆက် တော်လှန်ရေးများ၏ ကောက်ကြောင်းများ(7)
by Hla Soewai - May 09 2022
အမျိုးသားရေး အား တော်လှန်ရေး သဘောတရား အဖြစ် ခံယူလာခြင်း (၁)
ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားများ ဖြစ်သော လွတ်လပ်ရေး၊ ညီမျှရေး တို့ကဲ့သို့ ပင် အမျိုးသားရေး ဝါဒသည်လည်း ၁၈ ရာစုနှစ် အတွင်း သန္ဓေတည်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် နပိုလီယန် စစ်ပွဲများ၊ စက်မှု တော်လှန်ရေးကြီး၊ အနု ပညာနှင့် စာပေ လောကတွင် romanticism ခေါ် လူသားတို့၏ အရင်းခံ အရိုင်း သဘာဝကို ဖေါ်ကျူးသည့် ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး အစရှိသည်တို့ကြောင့် ဥရောပ ကုန်းမြေကြီး တခုလုံး ဗြောင်းဆန်အောင် သွက်သွက် ခါ လှုပ်ရမ်းနေသော အချိန်လည်း ဖြစ်ပေသည်။
လွန်လေပြီးသော နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်အတွင်း အမျိုးသားရေး ဝါဒသည် လူမျိုးတမျိုး၏ ကိုယ်ပိုင် လက္ခဏာ တရပ် အဖြစ် သဘောထားလာမှု နှင့် အတူ နိုင်ငံရေး အယူအဆ တရပ် အဖြစ် တဖြေးဖြေး ခြေကုပ်ယူလာ ခဲ့သည်။ အမျိုးသားရေး ဝါဒသည် ခေတ်စနစ် ကို ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်သော ပါဝါ ရှိနေခြင်းကြောင့် တော်လှန်ရေး အသွင် ဆောင်သည်ဟု ပြော၍ ရပေသည်။
ယဉ်ကျေးမှု နှင့် နိုင်ငံရေး အမျိုးသား ဝါဒ
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြောကြစတမ်း ဆိုလျှင် အမျိုးသားရေး ဝါဒအား ယဉ်ကျေးမှု ရှုထောင့်၊ သို့တည်းမဟုတ် နိုင်ငံရေး ရှုထောင့် မှ ဆက်စပ်စဉ်းစား ရှုမြင်နိုင်သည်။ ဘာသာ ဓလေ့ထုံးတမ်း နှင့် သမိုင်းကြောင်း အတူတူ ဖြစ်သော လူအစည်းအရုံးဝင်များသည် မိမိတို့အားလုံး တသွေးတည်း တသားတည်း ဖြစ်ရုံမက တူညီသော ဝိ‌သေသ လက္ခဏာများ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း ဟု ရည်ညွှန်း ပြောဆိုနိုင်ပေသည်။ ဤသည်က ယဉ်ကျေးမှု အမျိုးသားရေး ဝါဒ ဖြစ်သည်။
ထိုမှ တဖန် ဘာသာ ဓလေ့ထုံးစံ၊ သမိုင်း‌ကြောင်း တူညီနေသည့် လူမျိုးများသည် မိမိတို့ဖာသာ အုပ်ချုပ်၍ ရမည့် သီးသန့် နိုင်ငံ တခု ထူထောင်ရမည်။ ပြင်ပမှ ကျူးကျော်လာ၍ မရအောင် နယ်နမိတ်များ ကန့်သတ် ထိန်းသိမ်း ထားရမည် ဆိုသည်က နိုင်ငံရေး အမျိုးသားဝါဒ ပင်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားရေး ဝါဒ ကို အပေါင်း လက္ခဏာ ဆောင်မည့် အားလုံး တစုတဝေးတည်း ပါဝင်အောင် ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ပေသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ကိုလိုနီ အရှင်သခင် များ၏ လက်အောက်ခံ ဘဝမှ မိမိတို့ လူမျိုး များကို ရွေးထုတ် နိုင်ခဲ့ကြသည့် လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုကြီး များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရခြင်းမှာလည်း အမျိုး သားရေး ဝါဒ၏ စေ့ဆော် ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း ကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့်အတူ မြို့ပြနှင့် တိုင်း နိုင်ငံ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာပြီး ကမ္ဘာ‌ မြေပုံကြီး ကို ပြန်လည် ရေးဆွဲလာခဲ့ရသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး အတွင်း လန်ဒန် မြို့ကြီးကို ဂျာမန်တို့ တရစပ် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်နေစဉ် ထိုအမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ် တခု တည်းနှင့်ပင် ဗြိတိသျှတို့ တည်ငြိမ်စွာ ရင်ဆိုင်လာနိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော် အမျိုးသားရေး ဝါဒသည် အခြားတပါးသော လူမျိုးများကို မယုံသင်္ကာ ဖြစ်ကာ စိုးရွံ့လာတတ်ခြင်း၊ ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်လိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်အောင် အားပေးတတ်ပြန်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်း တွင် နယ်မြေ အများ အပြား အား မိမိတို့ ဘိုးဘွားပိုင်အလား ကိုလိုနီ ပြုကာ အုပ်ချုပ်လာကြခြင်း၊ နယ်မြေ သိမ်းပိုက် ကျွန်ပြုရေး စစ်ပွဲကြီးများ ဆင်နွှဲလာကြခြင်းများသည် အမျိုးသားရေး ဝါဒကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဒေါ့ဖ် ဟစ်တလာ သည် အခြား လူမျိုး နွယ်စု တစုအား မျိုးတုံးသွားသည်အထိ သတ်ဖြတ် လိုစိတ် ပြင်းပြခဲ့ခြင်း နှင့် အတူ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်ပွားလာခဲ့ရခြင်းမှာလည်း ထိုအမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်ကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
အမျိုးသားရေး ဝါဒသည် လွန်စွာ အားကောင်းသော လက်နက်တမျိုး ဖြစ်သဖြင့်လည်း ထိုဝါဒကို စွဲကိုင်လာ သူများ အပေါ် မူတည်ပြီး ကောင်းကျိုးကို ဖန်တီး နိုင်သလို ဆိုးကျိုး များလည်း ဖြစ်လာစေတတ်သည်။ ယနေ့အထိလည်း ထင်သာမြင်သာစွာ အားကောင်းနေဆဲ ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ သည် ဒီဂျစ်တယ် ခေတ်ကြီး နှင့် အတူ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ခေါ် ကမ္ဘာရွာကြီး ဖြစ်လာနေ၍ ထိုသို့ စီးမျောနေမှုများ တွင် ဘေးထွက်ထိုင်နေကြရသော အောက်ခြေ လူတန်းစားများ အတွက် စိုးရိမ်သောက များ ဖြစ်ပေါ်လာနေသော အချိန်အခါ လည်း ဖြစ်လာနေသော ကြောင့် မကျေနပ်မှုများ၊ ဘဝင်မကျမှုများ ခံစားနေရသော လူများ အတွက် နှစ်သိမ့်နိုင်စရာ မျှော်လင့်ချက်များ ဆက်လက် ပေးထားနိုင်စွမ်း ရှိနေသည်။ ။ ကောင်းသည် ဆိုးသည် ဖြစ်စေ အမျိုးသားရေး ဝါဒသည် ထိုသို့ ဘေးဖယ်ထုတ်ခံထားရသော လူတန်းစားများ အတွက် အတိတ်ကို ကိုယ်လိုရာ တွေးပြီး လွမ်းမောတမ်းတနိုင်အောင် ချွေးသိပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ယခုအခါ အမျိုးသားရေး ဝါဒ မြစ်ဖျားခံရာ နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှု ရေး၊ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ များအား မည်သို့ မည်ပုံ တုန့်ပြန်လာသည်ကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဗြိတိသျှ သမိုင်းပညာရှင် ပေါလ် လောရင့်စ် မှ “တိုင်းနိုင်ငံများ နှင့် အမျိုးသား‌ရေး ဝါဒသည် အမိဝမ်းတွင်းမှ အတူတူ ဆင်းသက်လာ‌သော အမွှာပူး များ ဖြစ်ပြီး ယနေ့ ကျွနုပ် တို့ သိလာခဲ့ရ‌သော ကမ္ဘာကြီးအား ပုံဖေါ် ပေးခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် စနစ်တကျ သုတေသန ပြုလုပ်ရန် ကြိုးပမ်းမှု မှန်သမျှ ကို ယခုထိ န‌ဝေတိမ်တောင် ဖြစ်အောင် ဖမ်းစားထားနိုင်ဆဲ ဖြစ်သည်” ဟု မိန့်ဆို ခဲ့ဖူးပေသည်။
မိမိတို့ ဆန်းစစ် လေ့လာသွားမည့် တာဝန်သည် စိန်ခေါ်မှုများ နှင့် ပြည့်နှက် နေသည်ကို အဆိုပါ သမိုင်း ပညာရှင်ကြီး၏ စကားက သက်သေခံနေပေသည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသားရေး ဝါဒသည် လွန်စွာမှ တော်လှန်ရေး အသွင်ဆောင်ပြီး နောက်ပိုင်း ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သော နိုင်ငံရေး နှင့် တော်လှန်ရေး ဖြစ်စဉ်များတွင် ပဓာန ကျသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသဖြင့် ထိုတာဝန်ကြီးကို ရှောင်လွှဲနေ၍ မဖြစ်ဘဲ လက်ကုန်နှိုက်၍ အဖြေထုတ်မှ ဖြစ်ပေတော့မည်။
"Four hostile newspapers are more to be feared thanathousands bayonets. Napoleon Bonaparte
According to Guinness World Records, the first person to be charged with speeding was Walter Arnold of the English village of Paddock Wood, Kent. On Jan. 28, 1896, Arnold was spotted going four times the speed limit in his 19th-century Benz—but since the speed limit at the time was just two miles per hour, that meant he was not going too fast by today's standards. The constable had to chase him down on his bicycle, issuingaticket for £4 7s.
Visitor Counter : 770645